Mashruuca Sorento: Booliska Canada wuxuu dhexgalayaa $ 2 Milyan oo ka mid ah Alaabada Xashiishadda Sharci darrada ah iyo Lacag Caddaan ah • Dawooyinka Inc.eu
Booliska Gobolka Durham ayaa gacanta ku dhigay 1,9 milyan oo doolar guri ku yaal xashiishad, THC-soo saar, qalimaan vape xashiishadda iyo edibles, iyo ilaa $ 150.000 oo lacagta Canada ah. Mid ka mid ah suuxdinta daroogada ugu weyn ee Project Sorento.
Booliska ayaa sheegay in saraakiishii markii ugu horeysay la ogaaday ka ganacsiga daroogada ee bartamihii bishii Sebtember markii qof ka mid ah dadka deegaanka uu ka cawday in daroogada sharci darada ah laga iibiyo dhalinyarada ku nool aaga Bowmanville. Ku Qeybta Kajawaabida Bulshada of the Qaybta Bari Jawaabta cabashada, baaritaan ayaa bilaabmay kaas oo qaatay ku dhowaad laba bilood.
Shan xarig iyo qabasho xashiishad sharci darro ah
Baadhitaanka ka dib, waxay xireen shan tuhmane oo kala duwan waxayna ku fuliyeen labo waaran oo baaritaan ah laba guri oo kala duwan: mid ku yaal Clipper Lane ee Bowmanville iyo mid ku yaalo wadada Sidmouth Street ee Mississauga. Qabsashada in ka badan 2 milyan oo doolar oo xashiishad ah iyo lacag caddaan ah oo lagu qabtay mid ka mid ah guryaha, booliisku waxay xireen shan tuhmane waxayna soo oogeen dacwado badan, oo ay ka mid yihiin: haysashada xashiish iib ah, iibinta xashiishadda, iyo haysashada sharci darro xashiishka.
Akhri wax dheeraad ah blogto.com (Source, EN)
El Camino Breaking Bad - hadda u fiirso!
Toddobaadkii hore waxaan wax ka qornay in muddo ah: El Camino. Fiidkii oo ...
Hawo sharciyeynta cagaaran.
Waxaa qoray Herbert M. Green - Sidee bukaanleyda xashiishka caafimaad u kicisay doodda adduunka xoog weyn. The…